Dagaalkii Muqdisho oo istaagay iyo Ciidamo Gurmad ah oo yimid | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaalkii Muqdisho oo istaagay iyo Ciidamo Gurmad ah oo yimid
Waxaa istaagay Dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Xasilinta Caasimada Muqdisho iyo Ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya oo u abaabulan qaab beeleed , waxaana dagaalka uu ka dhacay xaafada Haanta Dheer ee ku taala Agagaarka Xerada Saban Saban ee Degmada Dayniile .
Dagaalka ayaa bilowday saakay aroortii hore kadib markii ciidamada xasilinta damceen in hub ka dhigis ku sameeyaan ciidan hubeesan oo ku sugnaa Haanta Dheer, waxaana dagaal culus uu dhax maray labada ciidan.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka saakay ka dhacay magaalada Muqdisho , waxaana dadka khasaaraha uu kasoo gaaray ku jira shacab degnaa xaafadaha lagu dagaalamay.
Ciidamo gurmad ah ayaa soo gaaraya labada ciidan ee ku dagaalamay Magaalada Muqdisho, Ciidamada Milatariga ayaa gurmad ka helaya Gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan Degmada Afgooye iyo Deegaano kale , waxaana ciidankan yihiin kuwa huwan magac qabiil.
Waxaa sidoo kale aaga dagaalka gaaray ciidamo badan oo katirsan kuwa Xasilinta Caasimada, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka labada ciidan u dhaxeeya uu mar kale uu bilowdo sii hadii aan xal deg deg ah la helin.
Inta badan dadkii deganaa xaafadaha ku dhaw dhaw halka dagaalku ka socdo ayaa goobtaasi isaga qaxay, waxaana hada si tartiib tartiib ah u furmaya isku socodka laamiga u dhaxeeya Kuliyada iyo Ex-Control Afgooye opo saakay xirnaa.
Dowlada Soomaaliya ayaan wali wax war ah kasoo saarin dagaalka u dhaxeeyay labada ciidan ee ka dhacay Muqdisho, waxaana dagaalkan uu noqonayaa kii ugu xooganaa ee waayadan ka dhaca magaalada Muqdisho.